सरकारका लागि होइन, आफ्नै लागि घरमै बस्नुस् : ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १२, २०७६, १८:४८
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सोमबार लकडाउने गर्ने निर्णय गर्‍यो। लकडाउनका साथै सरकारले गरेका काम कारबाही, उपचारमा देखिएका चुनौती र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासका सम्बन्धमा नोभेल कोरोना रोग रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँग नेपाल लाइभका वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं नोभेल कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यसले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी काम गरिरहेको छ?
उच्चस्तरीय समन्वय समिति फागुन १७ गते बन्यो। त्यसपछि योजनाबद्ध ढंगले समितिले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ। योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको भन्नुको अर्थ परिस्थितिको गम्भीरता कसरी देखा पर्दैछ भन्ने पहिलो कार्य हो। अन्य देशमा के भइरहेको छ हाम्रो देशमा के पर्छ समितिले बुझ्दै गयो।
सबै पक्षसँग संवाद गर्दै गइयो। सर्वदलीय छलफल र सहमति समितिले गर्‍यो। अब हामी कोरोना भाइरस संक्रमण भएका बिरामीलाई उपचार गर्न छुट्टै अस्पताल चाहिन्छ भन्नेमा निश्चयमा पुग्यौं। त्यसको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ। केन्द्रीय कोष नबनाउने हो भने विपत्तिमा प्रभावकारी उपचार हुन सक्दैन।
स्वास्थ्यकर्मीको लागि सामग्रीको अभाव रहेछ। हाम्रोमा ती सामग्री थिएनन्। बाहिरी देशमा पनि हायलकायल छ। यसै हप्ता स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सामाग्री ल्याउने क्रममा छौं। देशबाट जहाज पठाएर भएपनि ल्याउने प्रक्रियामा छौं।
स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी हामी सबै काम गर्दछौं। जनतालाई सजग बनाउने, सचेत बनाउन र बाहिर हिडडुल गर्न हुँदैन भन्ने सचेत बनाइरहेका छौं। जनतालाई तपाईंको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि हो भनिरहेका छौं। सरकारको लागि मात्रै होइन, तपाईंको लागि र परिवारको लागि, देशको लागि बन्दाबन्दी गरेका छौं। त्यसपछि परिस्थिति कुन रुपमा अघि बढ्नुपर्छ, सरकार त्यसै रूपमा अघि बढ्छ।
निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरुलाई उपचार नगरी फर्काइरहेका छन्। डाक्टरहरूले उपचार गर्न मानिरहेका छैनन्। कारोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको यस्तो अवस्थामा कसरी बिरामीको उपचार हुन्छ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखेर पनि मान्छेहरू आत्तिएका छन्। त्यसकारण पनि तर्सिएका होलान्। दोश्रो कुरा, स्वास्थ्य उपकरण पनि छैनन्। तेश्रो विषय, मानसिकताले पनि काम गरेको छ।
उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीले उपचार तथा आफ्नै सुरक्षाको कुरा पनि उठाइरहेका छन् नि?
अस्पतालका मान्छेले यो सामग्री छैन भनेर बाहिर प्रचारबाजी गर्ने होइन। जे छ त्यसैको आधारमा अघि बढ्ने हो। अभाव कम गर्न छोटो समयमा पूर्ति गर्न लागिरहेको छ।
त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कति समय लाग्ला?
एक साता भित्र यी चिज उपलब्ध गराउँछौं।
विदेशीले मेडिकल उपकरण दिने भन्दै आएका छन्। किन ढिलाई भइरहेको छ?
हाम्रोमा उपलब्ध हुँदैन। बाहिरबाट ल्याउनैपर्छ। कति समय लाग्ने हामीले समय उपलब्ध गराउँछौं।
लकडाउन कति समयसम्म जाला भनेर जनतामा व्यापक चासो छ। सरकारले कस्तो आँकलन गरेको छ?
यो अनुमानबाट चल्ने कुरा होइन। यो संक्रमणको गम्भीरता कसरी प्रकट हुँदै जान्छ त्यस आधारमा तय हुन्छ। मान्नुस् एकछिनलाई यो संक्रमणको कम देखियो भने छिट्टै पनि हुन सक्छ। साच्चिकै संक्रमणको गम्भीरता धेरै भयो भने लामो समयसम्म जान पनि सक्छ।
लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, अशक्त अपांगलगायत साना व्यवासायीले सरकारले प्याकेजमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छन्। यस विषयमा केही सोचिएको छ?
सबैभन्दा पहिले यो बुझ्नुपर्‍यो कि यो संकट सबैका लागि हो। त्यसकारण हामी सबै संकटमा छौं भन्ने बुझ्नु पर्‍यो। यो संकटको अवस्थामा मानसिक र भौतिक दुवै रूपमा तयार हुनुपर्‍यो। दोस्रो कुरा राज्यले जनतालाई आश्यकताका आधारमा मर्न दिँदैन। तर, संकट भएकाले संकट त आउँन सक्छ त्यस्तो बेला राज्यले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग सबै गर्छ। राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिका खेल्छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सम्बन्धमा देखिएका मुख्य चुनौती के छन्?
हामीले सामाजिक व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो संक्रमण कुनै हावाबाट सर्ने होइन। यो व्यक्ति व्यक्तिबाट सर्ने हो। केही सामाजिक संस्कार र मनोरञ्जनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। जस्तै चाडपर्व, बिहे, ब्रतबन्ध, भोजभतेरमा हिँडडुल गर्ने, सिनेमा हेर्ने पौडी खेल्नेजस्ता जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
सरकारको लागि मात्रै होइन, तपाईंको लागि र परिवारको लागि, देशको लागि बन्दाबन्दी गरेका छौं। त्यसपछि परिस्थिति कुन रुपमा अघि बढ्नुपर्छ, सरकार त्यसै रूपमा अघि बढ्छ।
उपचारमा खटेका चिकित्सकलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। कोरोनालगायत अन्य यस्तै खालका रोगको उपचार गर्न विशेष खालको अस्पताल आवश्यकता देखिएको छ। यस्ता अस्पताल केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीयतहमा बनाउनु पर्नेछ। यस्ता रोगको ल्याब परीक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। त्यो अभाव खड्केको छ। यो कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि यस्ता काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
चीनको वुहानबाट आएका नेपालीलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखियो। भारतबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएन भन्ने छ नि?
त्यो व्यवस्थित कसरी हुन सक्छ? एकै दिनमा यसरी ह्वारह्वार्ती आएपछि कसरी व्यवस्थित हुन्छ? तर पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी परिचय लिएर ठेगाना लिएर जुनजुन प्रदेशका हुन्, त्यही प्रदेशमा विधिवत् रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ। उहाँहरुलई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।
नेपालमा बसिरहेका विदेशीका सम्बन्धमा के हुँदैछ?
विभिन्न देशबाट नेपालमा घुम्न आएका विदेशी आफ्नो देशमा जान जाहेमा पठाइन्छ। त्यो सबै व्यवस्था सम्बन्धित देशका नागरिकले आफै गर्नुपर्ने छ। यदि विदेश जान नचाहेमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ। उनको परीक्षण गरेर मात्रै आफ्नो देश जान्छन्।
अन्तमा स्वदेश तथा विदेशमा बसेका नेपालीलाई के भन्न चाहनु हुन्छ?
यो संकट कुनै सरकार वा राजनीतिक पार्टीका मात्रै अगाडि आएको होइन। कुनै नेता वा मन्त्रीका लागि मात्रै पनि आएको होइन। यो संकट सबै आमजनताका लागि आएको हो। यो सिंगो मुलुकको लागि आइलागेको संकट हो। यो मानवताका लागि आईलागेको संकट हो। त्यस कारण हामी अलग पार्टी, धर्म, भाषाका हौंला, यस्तो अवस्थामा हामी सबै एकताबद्ध भएर समना गर्नुपर्छ। हाम्रा व्यवहारहरुलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने छ। हाम्रा व्यवहारलाई सच्याउन जरुरी छ।
सरकारले आम जनतालाई घरभित्र बस्न भनेको छ। त्यो सरकारका लागि भनेको होइन। त्यो हाम्रो पार्टीका लागि भनेको होइन। यो तपाईंहरूकै लागि हो। तपाईंहरूको परिवारको लागि भनेको हो। यो संक्रमणका विरुद्ध लड्न सबैभन्दा पहिले आफूलाई जिम्मेवार बनाऔं तब मात्रै कोराना विरुद्ध लड्न सकिन्छ। हामी सबै हातेमालो गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौं भने यो संकटको सामना गर्न सक्छौं। अथवा संकटबाट निम्तिने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौं।